किन देखिन्छ यस्ता डरलाग्दा सपनाहरु ? —
२५ आश्विन २०७८, सोमबार ०१:३३ admin
सपनाको अर्थ बुझ्न सकिदैन । सपनाहरु राम्रा वा नराम्रो दुवै देखिन्छ । कहिले काँही डरलाग्दा सपनाहरु पनि देख्ने गरिन्छ । प्रसिद्ध लेखक थेरेसा चियुन्गले सपनाको अर्थको बारेमा बताएका छन् । उनले सपनालाई व्यक्तिको व्यक्तिगत वृद्धि र रचनात्मकताको संकेत भएको बताएका छन् ।
सपनामा कसैको मृ’त्यु भएको देख्नु जीवनमा आउने परिवर्तनको संकेत हो । यसको अर्थ सपना देख्ने व्यक्तिले जीवनमा कुनै कुरालाई अदबिदा भन्नुपर्ने समय आएको संकेत गर्ने थेरेसा बताउँछन् । कुनै काम, जागिर, घर वा सम्बन्धलाई समाप्त गर्नुपर्ने समय आएको बुझ्न सकिन्छ ।
भीडमा ना’ङ्गो हुनु
यदि सपनामा भीडमा ना’ङ्गो भएको देखियो भने देखावटी प्रवृत्तिलाई त्याग्ने समय आएको भन्ने बुझ्नुपर्छ ।
प्रियंकाको बोल्ड लुक्स, बनिन ट्रोलको सिकार ….- तस्बिरसहित
२० मंसिर २०७८, सोमबार ०८:१५ admin 0
उपचारको क्रममा अभिनेत्रीको अनुहार बि’ग्रिएपछि…
काठमान्डौ : तमिल फिल्मकी लोकप्रिय अभिनेत्री राइजा विल्सनले केहि समय अघि गलत उपचार गरेकोमा सामाजिक सञ्जाल...
२० मंसिर २०७८, सोमबार ०५:२९ admin 0
काठमाडौँ / नेपालीको भान्सा धान्ने सब्जी, स्कुस । घर–आँगनमा सजिलै फल्ने । धेरै फल्ने । सस्तो,...
१९ मंसिर २०७८, आईतवार ०४:०३ admin 0
आँखामा बसेको डार्क सर्कलका कारण चिन्तित हुनुहुन्छ ? यसरी सकिन्छ हटाउन ।
काठमाडौं, आँखावरिपरि काँचो आलुको टुक्राले मसाज गर्दा कालो घेरा कम हुँदै जान्छ ।पर्याप्त मात्रामा निद्राको कमी,...